Ngokuqhelekileyo ukushicilelwa, abezindaba zombane kunye nakude kumabonwakude, kukho ulwazi malunga neziyobisi ngeempawu ezimangalisayo ezikunceda ukulahlekelwa ngamapounds angaphezulu. Uninzi lwazo luxhaswa ngezinto eziphilayo, okanye izongezelelo zokutya. Akubona wonke umntu owaziyo, kodwa akusiyo yonke into ekhuselekileyo ekhuselekileyo kwimpilo yabantu kwaye, ngendlela, akubona bonke abavunyelwe ukuba basebenziswe oogqirha. Ukugqithisa ubude bekubhekwa njengesifo, kwaye ngenxa yoko, ngenxa yonyango lwawo, amayeza akhethekileyo ayadingeka ukunceda ukususa le ngxaki. Esinye isilungiso siya kuxoxwa kwinqaku lemihla "Phindisa iipilisi zokutya".
Phakathi kwezilwanyana ezingenanto ezingavunyelwe ukunyanga kwesifo esibi esichaphazelekayo, kukho isidakamizwa sibutramine. Izinto ze-sibutramine ziyinxalenye yamaninzi awaziwayo ngokunciphisa umzimba. Eninzi, mhlawumbi, eyaziwayo ukukhula okucuthayo ukusuka namhlanje, iyisithuluzi seMeridia yesizwe saseJamani. Umlingani wakhe waseRussia akayonto ephantsi kumgangatho kubo, obizwa ngokuba yiR Reduxin. Le nyeza ixabiso elincinci ngaphezu kwesicatshulwa esithandwayo, kodwa ngokubhekiselele ekusebenzeni kakuhle, akubi nakakhulu.
Impembelelo ye-Reduxin, njengamanqaku amaninzi, iqondiswa kumasebe engqondo yengqondo ejongene nokulawula ukulamba. Isilwanyana sisenza ngokuqinisekileyo umphumo wokungahlali kakuhle komzimba, ngoko isigulane esinyamezela ukunyanya kuninzi sidla ngaphantsi kwexesha eliqhelekileyo. Ukuba uthabatha eli gama ixesha elithile, unokukhawuleza ukufumanisa ukuba ukutya i-bun akuyona into enqwenelekayo, kwaye ekusebenzeni, ekugqibeleni uqale ukusebenza, kwaye ungaphuzi itiye kunye nabo osebenza nabo.
Ukuziva ulambile kukuyeka ukuqhubeka, okuqhelekileyo ukutya okuqhelekileyo. Ukuba uthatha isigqibo sokuthatha i-Reduxin ekulahlekeni kwesisindo, ngoko kuya kukunceda utshintshe indlela yokutya, kwaye xa uyeka ukuthatha isibisi, imimiselo emitsha iya kuhlala yakho kunye nexesha elide, eliya kunceda ukugcina ubunzima kwimimiselo.
Ngendlela, oku akukho konke. Iipilisi ze-Reduxin zichithwa iinkqubo ze-metabolic, zibeka i-blood glucose, i-cholesterol egazini, eyenza umzimba womzimba ukwandise umbane.
Kakade ke, le nkunkuma nayo ineempembelelo. Kungenzeka kube nomvakalelo omile emlonyeni, i-pulse ingaba rhoqo, ukulala kungaphula, ukunyuka kancinci kwingcinezelo, kwaye ngamanye amaxesha inzondo iyakwenzeka. Uninzi lweziphumo ezingathandekiyo ziza kudlula, ngoko akudingeki ukuba ukhansele iziyobisi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba impembelelo ekhawulezileyo nengundoqo yokuthatha i-Reduxin ayikho. Ukuze utshintsho emzimbeni wakho lubonakale, lufanele luthathwe malunga neenyanga ezintathu. Kodwa ungadanwa: isilwanyana senza ngokukhawuleza, kodwa siyinyaniso. Ngeveki uya kunceda ukususa ukuya ku-1 kilogram isisindo esingaphezulu. Ubunzima obuncinci omele uwasuse, obonakalayo umphumo uya kuba. Impembelelo enkulu ingafumaneka ngokulungisa ukutya kwakho ngokufaka imifuno kunye neziqhamo kuwo. Unokuxhuma kunye nokuzivocavoca umzimba emzimbeni. Kodwa ukuba uya kuthatha i-Reduxin iigakes kunye ne-buns, elele esihlalweni phambi kweTV, kungcono ukuba ungaqalanga ukuyithatha, ngokuba imimangaliso ayenzeki - ubunzima bakho bokuqala buya kuhlala kunye nawe.
I-reguxen ye-Reduxin iyinto elula kakhulu. Isiza kufuneka sithathwe ixesha eli-1 ngosuku, kungakhathaliseki ukuba sidle emini. Xa bekhumbula le nkunkuma, bayayifumana. Abavelisi bavelisa i-Reduxin ngendlela efanelekileyo yokufumana iifomsile eziluhlaza okwesibhakabhaka okanye okwesibhakabhaka. Ukupakisha i-Reduxin yenzelwe ukuwamkela inyanga enye.
Mhlawumbi, emva kokuba ufunde zonke ezi ngasentla, sele ulungele ukuqhuba u-Redux ukuya kwikhemisi efuphi. Musa ukukhawuleza. Kumele kukhunjulwe ukuba i-Reduxin iselaphi, elungileyo ithathwe kwiingcebiso zogqirha. Kwaye oogqirha babonelela i-Reduxin kuphela kubantu abagqithiseleyo, beqala nge-degree yesibini. Kwi-pharmacy, uya kuthengiswa ngala mapilisi ngokulahlekelwa kwesisindo kuphela kwimigomo, kodwa ukuba uhamba nge-pharmacy, unokufumana apho apho iresiphi engadingeki khona. Kodwa ngaba kukho isidingo sokubeka umngcipheko kwimpilo yabo?
I-Reduxin ineenombolo zokuchasene. Ayikwazi ukuthatyathwa kubantu abaphethwe yintsholongwane kunye nokungafezeki, ukuxinzeleleka kwegazi, izifo zesimiso senzwa. Ngokuqinisekileyo, ukuba unengxaki ezifanayo, kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho malunga nokucebisa ukuthatha i-Reduxine. Ngokuqhelekileyo iingxaki zobunzima obunzima zivela emva kokuziswa kwabasetyhini. Kufuneka kukhunjulwe ukuba ngexesha lokukhulelwa kunye nelasezintombi abafazi kufuneka bazibandakanye ngokuthatha nayiphina imithi. Kuyafana okufanayo malunga nokwamkelwa kwe-Reduxin. Musa ukubeka ingozi kwimpilo yakho kunye nempilo yabantwana.
Xa ukhetha indlela yokulahlekelwa kwesisindo, ngokuqinisekileyo, kuyafaneleka ukubuyela kwi-Reduxin, kodwa asimele sikhohlwe ukuba le nkunkuma, ngoko kufuneka udibane nodokotela ngaphambi kokuthatha iyeza.
Abaxinzelelo be-anti-depressants bakwazi ukugcina ubomi bombolo enkulu yamaMerika
Iipropati zokuphilisa iiqanda zesiqu
Imithetho embalwa yeholide enempilo
Iimpawu zokucebisa ngekhalenda yenyanga
Iibisiki ezinobisi ezinamaqabunga ezinama-manga
Indlela yokufunda ukuyeka abantu?
I-coat ye-Oatmeal ne-coffee icing
IHoroscope ye-Scorpio-Abafazi ngoJanuwari 2017
Iifatata eziselula kwiintlanzi